I-OPPO A9X: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa ngokusesikweni | Zonke iinkonzo ze-intanethi
I-OPPO A9X: Uluhlu olutsha lwenqanaba lomgangatho lusemthethweni
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo i-OPPO A9 yandlalwa ngokusesikweni, a Umzekelo ophakathi ophakathi wegama laseTshayina. Uphawu ngoku lusishiya nefowuni entsha, esinokuthi siyibone njengenguqulelo eguqulwe kancinane yale fowuni. Imalunga ne-OPPO A9X, esele inikezelwe ngokusemthethweni e-China. Enye ifowuni entsha kuluhlu oluphakathi.
Uluhlu oluphakathi sisiqingatha apho uphawu lwaseTshayina lutyala imali kakhulu kumaxesha akutshanje, njengoko sibonile nge-OPPO Reno. Ngoku, basizisela le-OPPO A9X, ethi yongeza kwi-48 MP yekhamera, Esibona kakhulu kwiifowuni ze-Android kwezi nyanga.
Kule meko, Uyilo lwesixhobo alubonakalisi zonkqiso zininzi kangaka. Ifowuni enotshi emile njengokuhla kwamanzi ngaphambili, ekuvumela ukuba uthathe ithuba elingaphambili lesixhobo ngendlela elungileyo. Ngasemva sinekhamera ephindwe kabini, njengesiqhelo kuluhlu oluphakathi lwangoku kwi-Android.
1 Ukucaciswa kwe-OPPO A9X
Ukucaciswa kwe-OPPO A9X
Kwinqanaba lobugcisa, inikwa njengemodeli ehambelana kakuhle. Ngokunokwenzeka ukhetho lweprosesa yinto abasebenzisi abaninzi abangayithandiyo, kodwa ngokubanzi sifumana uluhlu oluphakathi oluphakathi. Uyilo lwangoku, ibhetri elungileyo kunye neekhamera ezisebenza njengezona zinto zinomdla kubasebenzisi abaninzi. Le yinkcazo epheleleyo ye-OPPO A9X:
IsikriniI-6,53 intshi TFT ngesisombululo se-FHD +
Inkqubo yokusebenzaI-Android 9 Pie enemibala ye-6
Ibhetri: 4.020 mAh kunye ne-VOOC 3.0 ngokukhawuleza
ConectividadDual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), iBluetooth 4.2, GPS, GLONASS
abanye: Irediyo ye-FM, i-3.5mm jack yomsindo, umfundi ongasemva weminwe
Ubukhulu: 162 x 76.1 x 8.3m
Ifowuni igcina imeko yezikrini ezinkulu esizibonayo, kule meko ine-intshi ye-6,53 ubukhulu. Iprosesa efike kule-OPPO A9X yiHelio P70. Yenye yezona zinto zigqibeleleyo iMediaTek inebanga eliphakathi, ngenxa yoko sinokulindela ukusebenza kakuhle, nangona uninzi lwabasebenzisi bengonwabanga ngolu khetho. Ibhetri yefowuni inomthamo we-4.020 mAh, ekufuneka inike inkululeko elungileyo maxa onke. Ukongeza, sihlawulisa ngokukhawuleza uphawu lwesiTshayina olukhoyo kulo. Kuya kufuneka ugcine ukhumbula ukuba iza nePie ye-Android njengenkqubo yokusebenza. Le yinto enceda kulawulo olungcono lwebhetri yefowuni.
Iikhamera yenye yezona zinto zibaluleke kakhulu kwisixhobo. Ikhamera yangasemva kabiniNgama-48 + 5 MP. Yongeza kwindlela yokusebenzisa iikhamera ezingama-48 MP, esizibonayo kakhulu kwiifowuni ze-Android. Zonke iikhamera ezisefowunini ziza nobukrelekrele bokwenza izinto, ezinceda ukufumanisa imeko kwaye sinezinye iindlela zokufota. Kwikhamera yangaphambili sinesenzi esinye, i-16 MP. Inzwa yeminwe kule OPPO A9X imi ngasemva, njengoko sinokubona kwiifoto zefowuni. Akukho nto ikhankanyiweyo malunga nobuso bokuvula ubuso kwisixhobo.
I-OPPO A9X izokwaziswa e-China ngoMeyi 21, ngolwe-Lwesibini olandelayo ke. Iza kuqwalaselo olunye lwe-RAM kunye nokugcinwa kwangaphakathi, okuyi-6/128 GB. Ngokuphathelele imibala, izokwaziswa ngemibala emibini eyahlukeneyo, eyile: Meteorite Mnyama kunye neIce Jade White, zezinto esinokuzibona kwiifoto zefowuni ukuza kuthi ga ngoku.
Ixabiso lale-OPPO A9X liza nexabiso le-1.999 yuan, emalunga nee-260 zeerandi zokutshintsha. Eyona nto inokwenzeka, ukuba ifowuni ifika eYurophu iya kuba nexabiso eliphezulu. Kodwa okwangoku inkampani ayikhankanyi nto malunga nokuqaliswa kwesixhobo kwezinye iimarike. Sinethemba lokufumana ulwazi oluninzi kungekudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-OPPO A9X: Uluhlu olutsha lwenqanaba lomgangatho lusemthethweni
[APK] Umkhangeli omtsha weFenix ​​weMozilla ungena kwi-beta ngenjini ekhawulezayo kunye nonxibelelwano lwangoku